FAQs - Linyi Win-Win Machinery Co., Ltd.
Mifananidzo yekudhinda inogara kwenguva yakareba sei kunze nekunze?
Mifananidzo yekudhinda inogona kugara makore matatu kunze, uye anopfuura makore gumi mukati.
Ndeipi mutengo weinki wekudhinda pane izvo zvinhu?
Kazhinji inenge yakakomberedza 0.5-1usd pamamirimita mita kune inki mutengo.
Zvakadii nezve kudzikama uye mhando yemifananidzo yekudhinda?
Iyi UV flatbed printa inogona kushandiswa kudhinda pane mazhinji emidhiya ine akanakisa mhando, mukurumari, mhinduro yakanaka
Zvakadii nezve maintance uye aftersales sevhisi?
Injiniya wedu anowanikwa sevhisi, uye isu tinogona kupa kure kudzora sevhisi uye online sevhisi kune vatengi. Asi anodhura anofanira kuve nemutoro wekugara pamwe nekutakura mitengo yevashandi vehunyanzvi.
Iwe uri mugadziri kana mutengesi mumiriri?
Isu tiri mugadziri weVV flatbed maprinta.
Pane chero vimbiso kune ino printa?
Ehe, isu tine vimbiso yemudhinda. Isu tinopa gumi nematanhatu garandi yezvinhu zvese zvemagetsi zvinosanganisira bhodhi hombe, bhodhi rekutyaira, bhodhi rekudzora, mota, nezvimwe, kunze kwekushandisa, senge pombi yeingi, yekudhinda musoro, yefa yeingi, uye slide block nezvimwe.
Ndingaite sei kuisa uye kutanga kushandisa iyo printer?
Kazhinji isu tinoronga technican yekumisikidza uye kudzidziswa mufekitori yako. kana iwe unogona kuverenga bhuku revashandisi kuti unzwisise muchina. Kana iwe uchida chero rubatsiro, nyanzvi yedu inogona kukubatsira kuburikidza ne Teamviewer. Pese paunenge uine mibvunzo kumuchina, unogona kubata nyanzvi kana ini zvakananga.
Ini ndinogona kuwana zvekushandisa uye kupfeka zvikamu kubva kwauri?
Hongu, isu tinopa ese akapfekera mativi evaprinta vedu nguva dzose uye ivo varipo.
Sei iwe kuzadzisa garandi?
Kana paine zvemagetsi kana chikamu chemuchina chakasimbiswa kutyorwa, Ntek anofanirwa kutumira chikamu chitsva mukati maawa makumi mana nemasere nekutaura senge TNT, DHL, FEDEX .etc kumutengi. Uye mutengo wekutakura unofanirwa kuzvarwa nemutengi.
Ndedzipi mhando dzezvinhu zvinoda kutanga usati wadhinda?
Girazi, zvedongo, metel, acrylic, machena nezvimwewo